Fri, Dec 14, 2018 | 23:12:06 NST
झोल मल प्रयोग गर्न नजान्दा....
सिद्धराज राई/ उज्यालो । धनकुटा, चैत २ – अर्गानिक मल भन्दै कृषि सामाग्री कम्पनीले बिक्रि गर्न थालेको झोल मलको प्रयोगबारे प्राविधिक जानकारी नगराउँदा धनकुटाका कृषकले नोक्सानी बेहोरेका छन् । कम्पनीले फागुनदेखि बिक्रि गर्दै आएको स्पेनबाट आयातित झोल मलको प्रयोग गर्न नजान्दा किसानहरुको बालीमा क्षति पुगेको हो ।
दूध उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्यो
भक्तपुर, चैत १ – भक्तपुरमा गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्ष ५० प्रतिशतले दूध उत्पादनमा कमी आएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा दैनिक १६ हजार लिटर दूध उत्पादन भएकोमा अहिले आठ हजार लिटर मात्र उत्पादन हुने गरेको दुग्ध उत्पादन सहकारी सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
पहिलो पटक झोल रासायनिक मलको बिक्री शुरु
सुनसरी, फागुन २९ – नेपाली बजारमा पहिलो पटक झोल रासायनिक मलको बिक्री शुरु भएको छ । कृषि समाग्री कम्पनी लिमिटेडको सहयोगमा अल नेप्लीज् टि एण्ड कफी सेन्टरले झोल रासायनिक मल ल्याएको हो ।
सरकारी लापरबाहीले उन्नत जातका गाईंभैंसी ल्याउने तयारी अलपत्र
काठमाडौं, फागुन २९ – देशमा दूधको आपूर्ति बढाउन सरकारले भारतबाट उन्नत जातका गाईभैंसी ल्याउने बताएपनि पशु सेवा विभागको लापरबाहीका कारण तत्काल ल्याउन नसकिने भएको छ । गाईभैंसी भन्दा विर्य आयातमै फाईदा भएकाले विभागका कर्मचारीले असहयोग गरेको स्रोतको भनाई छ ।
सकियो कृषिमेला, ४० हजार दर्शकद्वारा अवलोकन
काठमाडौं, फागुन २८ – नेपाली किसान व्यावसायिक बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै पाचौँ कृषिमेला सकिएको छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले फागुन २६ गतेदेखि भृकुटी मण्डपमा शुरु भएको मेला झण्डै ४० हजारले अवलोकन गरेको अनुमान छ ।
‘हलो क्रान्तिको शुरुवात पोखराको बाटुलेचौरबाट’
पोखरा, फागुन २८ – मुक्तिनाथ स्मृति प्रतिष्ठानले हलो क्रान्तिको शुरुवात पोखराको बाटुलेचौरबाट भएको दावी गरेको छ । प्रतिष्ठानले आइतबार पोखरामा कार्यक्रम गरि २००१ साल फागुन २८ गते बाटुलेचौरमा स्वर्गीय पण्डित मुक्तिनाथ शर्माले हलो जोत्नुभएको बताएको छ ।
काठमाडौंमा पाँचौ राष्ट्रिय कृषि मेला
काठमाडौं, फागुन २६ – कृषि उत्पादनको प्रवर्धन र विस्तार गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंमा पाँचौ राष्ट्रिय कृषि मेला हुँदैछ । ‘कृषिमा ब्यवसायिकरण खाद्य सुरक्षा र आयआर्जन’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मेला हुने छ ।
पशुधन बिमा कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने तयारी
ललितपुर, फागुन १९ सरकारले पशुधन बिमा कार्यक्रम छिटै ल्याउने तयारी गरेको छ । गाई र भैंसीको बिमा गराउने उदेश्यका साथ आवश्यक ऐन बनाउने प्रकृया शुरु भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवसायिक गाईभैंसी पालनमा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले बिमा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।
स्थानीय जातको संरक्षण गरः बिज्ञ
पोखरा, फागुन १७ - स्थानीय जातको बालिनाली र पशुपंक्षी संरक्षणमा कृषि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । कास्कीमा भएको राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान कार्यशालामा रैथाने जातको प्रयोग र संरक्षणमा छलफल केन्द्रित रहेको नार्कले जनाएको छ ।
पुर्ख्यौली पेशा छोडी व्यावसायिक कुखुरापालन
पर्वत, फागुन १६ – पर्वतको मालढुंगाका बोटे समुदायले पुर्ख्यौली पेशा परिवर्तन गरी ब्याबसायिक कुखुरापालन शुरु गरेका छन् । कालीगण्डकी नदीको किनारमा बालुवा चाल्ने र माछा मारेर जीबिका चलाउँदै आएका बोटे समुदायले जिल्ला बिकास समिति पर्वतको सहयोगमा ५ सय चल्लाबाट कुखुरापालन शुरु गरेका हुन् ।
प्राविधिक ज्ञान नहुँदा उत्पादित कफी बोटमै सुक्यो
स्याङ्जा, फागुन १६ – आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको कमीले स्याङ्जाका बिभिन्न गाउँमा उत्पादीत कफी बोटमै सुकेर गएको छ । मौसम अनुसारको बोट संरक्षण, बोटमा फलेका फलको व्यवस्थापन जस्ता ज्ञानको अभावले कफी नष्ट भएको छ ।
सामुन्द्रीक वातावरणमा क्षति पुगेको भन्दै विश्व बैंकको चिन्ता
फागुन १३ – विश्व बैंकले पानी प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन र माछाको शिकारका कारण समुद्रको वातावरणमा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ । उसले मानव क्रियाकलापका कारण प्राकृतिक बासस्थान नष्ट भैरहेको र महासागरमै ठूलो खतरा देखिएको भन्दै चेतावनी दिएको छ ।
देशमा कुनै ठाउँमा बर्ड फ्लु छैनः पशु सेवा निर्देशनालय
काठमाडौं, फागुन १० अहिले देशका कुनै पनि ठाउँमा बर्डफ्लु नरहेको पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । यसअघि बर्डफ्लु देखिएका ठाउँमा पूर्ण नियन्त्रण गरिएको र सम्भावित ठाउँमा निगरानी पनि भैरहेकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको निर्देशनालयको भनाई छ ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरको हल्ला धेरै
ललितपुर, फागनु ९ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रचार गरिए जस्तो नभएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा पाईने पाईका जातको खरायोको जीवन शैलीको अनुसन्धानबाट यो कुराको पुष्टि भएको हो ।
फूलको आन्तरिक उत्पादनले ९० प्र्रतिशत धान्न थाल्यो
ललितपुर, फागुन ९ पछिल्लो समय स्वदेशी फूलले नै आन्तरिक माग धान्न थालेको छ । खास चार्ड पर्वमा बिदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएपनि अरु समयमा लगभग मागको ९० प्रतिशत नेपाली उत्पादनले नै धान्न थालेको फूल ब्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
बाघ बचाउन बाघ चोकको निर्माण
बर्दिया, फागुन ८ - बाघ बचाउन बर्दियाको ठाकुरद्वारा बजारमा बाघ चोक निर्माण गरिने भएको छ । शिवरात्रीको अवसर पारेर ठाकुरबाबा मन्दिर गेट अगाडीको ठाकुरद्वारा भुरीगाँउ सडकको बीचमा वन तथा भु संरक्षण मन्त्री मोहमद वकिल मुसलमानले बाघचोकको शिलान्यास गर्नुभयो ।
गर्मी बढ्दैछ काठमाडौंमा
काठमाडौं, फागुन ८ काठमाडौंमा दिउँसोको समयमा विस्तारै गर्मि बढ्दै छ । केही दिन अघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामा १८ देखि २० डिग्री रहेको अधिकतम तापक्रम हिजो आज २२ देखि २४ डिग्रीको हाराहारीमा उक्लिएको थियो ।
बजारमा कुरिलो र कटहर आउन थाल्यो
काठमाडौं, फागुन ६ - बजारमा नयाँ तरकारीको रुपमा कुरिलो र कटहर आउन शुरु भएको छ । विशेष गरी झोल बनाएर खान कुरिलोको प्रयोग गरिन्छ । तर मुखय सिजन सुरु भइनसकेकाले अहिले कुरिलो निक्कै महँगो छ । आज थोक बजारमा कुरिलो प्रतिकिलो रु २ सय ५० छ ।
धानको व्याड राख्न थालियो
ललितपुर, फागुन ६ - सिंचाई सुविधा भएका ठाउँका किसान यतिबेला चैते धानको व्याड राख्ने काममा व्यस्त छन् । कतिपयले ब्याड राखिसकेका छन् भने कतिपय राख्ने तयारीमा छन् । फागुनको १५÷२० सम्ममा ब्याड राख्न उपयुक्त हुने धानबाली विज्ञ हरिकृष्ण उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
देशभर २ सय ५० वटा सामुदायिक पशु प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिने
काठमाडौं, फागुन ५ – पशु उत्पादन निर्देशनालयले देशभर २ सय ५० वटा सामुदायिक पशु प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । निर्देशनालयले किसानबाट स्थापना भएका दुग्द्य उत्पादक सहकारी मार्फत अनुदान दिएर पशु प्रजनन केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
गोलभेंडाको भाउ घट्यो
काठमाडौं, फागुन ५ गोलभेंडाको भाउ लगातार ओरालो लागेको छ । चार पाँच दिनयता भाउ घट्ने क्रममा आज थोक बजारमा गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो रु ८ देखि रु १० मा झरेको छ ।
अदुवाको उत्पादन बढ्यो
काठमाडौं, फागुन ५ यस वर्ष अदुवाको उत्पादन राम्रो भएको छ । उत्पादन धेरै भएकाले भाउ पनि सस्तो भएको छ । गतबर्ष प्रतिकिलो ३५ देखि ५५ रुपैंया थोकमूल्य रहेको अदुवा यो वर्ष प्रतिकिलो रु १२ देखि रु १८ मा कारोवार भइरहेको छ ।
चिनु र कागनुको उत्पादन बढाउने लक्ष्य
काठमाडौं, फागुन ४ - उच्च पहाडी क्षेत्रमा परम्परागत रुपमा खेती हुँदै आएको चिनु र कागनु नामको खाद्यबालीको उत्पादन बढाउन अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको बीउ बिज्ञान प्रविधि महाशाखाले अनुसन्धानको काम थालेको हो ।
तरकारीको आयात बढ्यो, भाउ घट्यो
काठमाडौं, फागुन ३ – तराईमा गर्मीले गर्दा तरकारी छिटो तयार हुन थालेपछि काठमाडौंमा पनि एकैपल्ट धेरै तरकारी भित्रन थालेको छ । काठमाडौंमा तरकारी धेरै भित्रिएपछि किसान र व्यापारीले भाउ पाएका छैनन् ।
काठमाडौं, फागुन ३ - यसपाली हिउँदमा राम्रो वर्षा भएकाले गहुँको उत्पादन बढ्ने कृषि विज्ञहरुले अनुमान छन् । दाना लाग्ने बेलामा पानी परेकाले गहुँको उत्पादन बढ्ने भएको हो । यसवर्ष मौसम राम्रो भएकाले धान र मकैको उत्पादन पनि बढेको थियो ।
अहिलेका तरकारीमा बिषादी कम
ललितपुर, माघ २९ जाडोयाममा हरियो तरकारीमा विषादीको कम प्रयोग हुने गरेको छ । गर्मी महिनामा धेरैजसो हरियो तरकारीको सिजन नहुने र तरकारी छिटो बिग्रने हुँदा ताजा राख्नका लागि बढी विषादीको प्रयोग हुन्छ ।
काठमाडौंमा ईको फेयर सुरु
काठमाडौं, माघ २८ – काठमाडौंमा शनिबारदेखि ईको फेयर सुरु भएको छ । हिमाल मिडिया एशोसिएसनले गरेको ईको फेयर, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा शुरु भएको हो ।
दाङ जिल्ला पनि बर्डफ्लूको उच्च जोखिममा
दाङ, माघ २७ – दाङ जिल्ला पनि बर्डफ्लुको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै मध्यपश्चिम क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले चेकजाँचमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ । पूर्वी नेपालमा बर्डफ्लु भेटिएपछि पूर्वका पंक्षी तथा पंक्षी जन्य पशु तथा पशुजन्य वस्तु राप्ती नदी पश्चिम लैजान नदिई भालुबाङमै रोकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङका प्रहरी निरिक्षक अशोकप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
हप्तामा एकदिन सरकारी गाडी चलाउन प्रतिबन्ध
माघ २७ – चीनले उर्जा बचत र प्रदुषण नियन्त्रणका लागि हप्तामा एकपल्ट सरकारी सवारीसाधन चलाउन रोक लगाउने तयारी गरेको छ । प्रदुषण नियन्त्रणका लागि आगामी चार वर्षभित्र यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
फलफूलका बिरुवा काँटछाँट गर्न बिज्ञको सुझाव
काठमाडौं, माघ २५ नयाँ पालुवा पलाउनु र फूल खेल्नअघि नै फलफूल बगैंचा व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । फलफूल विकास निर्देशनालय कीर्तिपुरका बरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेका अनुसार अहिले फलफूलको काँटछाँट र गोडमेल गर्ने उपयुक्त समय हो ।
भक्तपुरमा कृषि गणना सुरु
भक्तपुर, माघ २३ – भक्तपुरमा कृषि गणनाको काम सुरु भएको छ । माघ महिना भित्र सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु कृषि गणना कार्यक्रमका लागि चार जना सुपरिवेक्षक र १८ जना कर्मचारी खटाएको जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख सूर्यलाल भोमीले जानकारी दिनुभयो ।
लमजुङ, माघ २३ – लमजुङको ग्रामीण क्षेत्रमा केही बर्षअघि उल्लेख्यमात्रामा पाईने भीरमौरी पछिल्लो समय लोप हुँदै गएको छ । भीरहरुमा पाईने भीरमौरी लोप हुन थालेपछि स्थानीयवासिन्दा चिन्तित बनेका छन् ।
अब मासु पनि अनलाइनबाटै
काठमाडौं, माघ २१ – नेपालमा पहिलोपटक अनलाईनबाट मासु बिक्री सुरु भएको छ । काठमाडौंको कपनमा शनिबारदेखि सञ्चालन भएको अचानो मिटल्याण्डले अनलाईन तथा टेलिफोनबाट मासु बिक्री गर्ने सेवा सुरु गरेको हो ।
चिसोबाट जोगाउन बाँदरलाई रेडवाईन
माघ २१ – तापक्रम माईनस ४० डिग्रीको हाराहारीमा झरेपछि कजाकस्तानको केन्द्रीय चिडियाखानाका बाँदरहरुलाई चिसोबाट बचाउन भन्दै वाईन खुवाईएको छ । बाँदरलाई चिसोका कारण हुने श्वासप्रस्वास सम्बन्धि संक्रमणबाट जोगाउन भन्दै तातो पानीमा चिनी र फलफूल सहित रेडवाईन मिसाएर खुवाईएको थियो ।
फुर्सदको समयमा कमाउन कृषि
भावुक योगी/ उज्यालो । बर्दिया, माघ २० – तपाई दिनभरिको काम वा अध्ययनबाट फुर्सद मिलेपछि के गर्नुहुन्छ ? यदि त्यो समय त्यतिकै खर्च गर्ने बानी छ भने एकपटक सोच्नुहोस त, त्यो समय उपयोग गरेर पनि आर्थिक उपार्जन गर्न पो सकिन्छ कि ?
८५ किलोको बोको हेर्न भिड
राजकुमार श्रेष्ठ/उज्यालो । तनहुँ, माघ १७ - वोयर जातको उन्नत वोका हेर्न प्रथम डुम्रे महोत्सवमा दर्शकको भिड नै लागेको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र बाख्रा फार्म बन्दिपुरबाट ल्याइएको वोकाको तौल ८५ किलो छ । किसानलाई व्यावसायिक रुपमा बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित गर्न र मध्य पहाडी भेगका लागि सिफारिश गरिएको जातबारे जानकारी दिन महोत्सवमा उन्नत जातका वाख्रा र बोकाहरु राखिएको अनुसन्धन केन्द्रका वैज्ञानिक देवी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली कृषि वैज्ञानिकको खोज विश्वमै उत्कृष्ट
काठमाडौं, माघ १५ — नेपाली कृषि वैज्ञानिकहरुले तयार पारेको जिवातु नामको जैविक तत्व विश्वमै लोकप्रिय भएको छ । केही दिनअघि थाईल्याण्डमा भएको तरकारीबाली सम्बन्धी सम्मेलनमा यसबारेको प्रस्तुतिले अरुको समेत ध्यान तानेको हो ।
अदुवाले उचित मूल्य नपाएपछि किसान चिन्तित
केशबप्रसाद भट्टराई/ उज्यालो । ताप्लेजुङ, माघ १४ – अदुवाले उचित भाउ नपाएपछि ताप्लेजुङका किसान चिन्तित भएका छन् । गएका वर्षहरुमा अदुवाले राम्रो भाउ पाएपछि उत्साहित किसान यस बर्ष भाउ राम्रो नहुँदा चिन्तित बनेका हुन् ।
काठमाडौं, माघ १३ बजारमा बढी भित्रिएपछि आज गोलभेंडाको थोक भाउ किलोमा ४ रुपैंया सम्म घटेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिने
काठमाडौं, माघ १२ – सरकारले कृषि क्षेत्रमा पूर्नसंरचना गरि १ लाख ५० हजारलाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सुशासन तथा आर्थिक समृद्धि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सरकारले आफ्नो कार्ययोजना मार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अर्धबेरोजगारी मध्ये ५० प्रतिशत पूर्ण रोजगारीमा रुपान्तरित हुन गई थप १ लाख ५० हजारले नयाँ रोजगारी पाउने अपेक्षा गरेको छ ।